Waxaan ka badanahay kaliya sahannada internetka
Ebuno, waxaad lacag kaga heli kartaa khadka tooska ah adigoo dhameystiraya sahan aad u fudud oo fudud. Markaa waad kasban kartaa lacag intaad fikirkaaga maqasho.
Dib u soo Celinta Waxqabadka Emailka
Dib u dir!
Ku noqo foomka diiwaangelinta
Hadda ku soo biir!
Markaad iska diiwaangeliso Ebuno, waxaad ogolaatay Ebuno's Shuruudaha Adeegga, Siyaasadda Qarsoonaanta & Rules.
Ama ku xirmaan warbaahinta bulshada
Diiwaangelinta waa la dhammeeyay!
Hadda, kafiiri sanduuqaaga emayl aad naga hesho si loo xaqiijiyo cinwaanka emaylkaaga.
Haddii aadan ku helin 5 daqiiqo gudahood, hubi spambox-kaaga.
Wixii taageero dheeraad ah. Fadlan la xiriir [emailka waa la ilaaliyay]
Email cusub ayaa la diray!
Waxaa la soo diray emayl firfircoon oo cusub haddii emaylku ka diiwaangashan yahay keydkeena.
Maxaad ku sameyn kartaa Ebuno.
Ka jawaab sahannada internetka ee u dhigma astaantaada isla markaana lacag lagu siiyo.
Waxoogaa lacag ah dib ugala soo iibso internetka.
Baadh codadka bulshada, ka jawaab su'aalaha bulshada ama samee mid adiga kuu gaar ah.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sahannada la bixiyay
Maxay Yihiin Daraasado La Bixiyo?
Xog uruurinta la bixiyay ayaa si fudud u ah sahan joogto ah oo kugu abaalmarinaya abaalmarintiisa. Waxaa jira shirkado qarash badan ku bixiya sanad walba si ay u ogaadaan waxa macaamiisha ay ka qabaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda iyo waxa ay sifiican ugu qaban karaan.
Immisa ayaan kasbadaa?
Qiimaha sahan kastaa wuu kala duwanaan karaa iyada oo ku xidhan arrimo badan sida waqtiga ay ku qaadato in la dhammaystiro. Caadi ahaan waxaad heshaa kudhowaad $ 1 10kii daqiiqadood ee sahamin ah laakiin way ka sii badnaan kartaa. Waxay sidoo kale kuxirantahay sida ugu dhakhsaha badan ee aad uga jawaabeyso su'aalaha.
Sidee sahan bixintu uga shaqeeyaan Ebuno
Shirkaduhu waxay had iyo jeer raadiyaan siyaabo ay ku horumariyaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda hal dariiqo oo ay ku sameeyaanna waa iyagoo weydiiya macaamiishooda fikradahooda Dhab ahaantii shirkado badan ayaa ku bixiya malaayiin doolar sanad kasta sahanno la bixiyo si ay u awoodaan inay helaan dhammaan macluumaadka qiimaha leh oo ah fikirkaaga! Marka shirkad ay sameyso sahan, waxaan u riixnaa isticmaaleyaashayada waxaanan siinaa dhiirigelin ay kaga jawaabaan dhowr su'aalood. Markaad ka jawaabto dhowr sahan, waxaad awoodi doontaa inaad dib ugala noqoto dakhligaaga processor-ka aad doorbideyso. Saxeex maanta! Waxay qaadaneysaa kaliya 2-3 daqiiqo kahor intaadan udareerin sahamintaada ugu horeysa ee lacag la bixiyo.
Sidee lacag ugu kasbataa sahannada la bixiyo ee Ebuno
Waxaad lacag ku kasban kartaa adoo ka jawaabaya sahaminta ka socota Ebuno. Way fududahay sida looga jawaabo sahan kasta oo kale khadka tooska ah, laakiin farqiga ayaa ah in lacag lagaa siiyo si aad u sameyso. Inta aad kasbato, waxay kuxirantahay inta sahan ee aad qaadatid.
Sahannada la bixiyo waxay ka caawiyaan shirkadaha inay horumariyaan
Shirkaduhu waxay gacan ka geysan karaan hagaajinta ganacsigooda iyagoo ku daabacaya sahanno ku saabsan barnaamijkeenna. Intaa ka dib, waxaan u siineynaa isticmaaleyaasheena dhiirigelin ku saabsan ka jawaabida sahanadan taas oo ku dhiirrigelinaysa isticmaaleyaasheena inay sii wadaan ka jawaabista sahanno badan.
Ebuno waa shirkad iswiidhish ah oo ilaa iyo 2017. ka shaqeyneysay kana shaqeeynaysay warshadaha sahaminta tan iyo XNUMX. Barmaamijku waa mid gaar ah oo leh naqshad gaar ah iyo adeegsade adeegsade Kahor intaadan bilaabin inaad sameyso sahamintaada koowaad, waxaad buuxineysaa macluumaad aasaasi ah oo adiga kugu saabsan si aad nooga caawiso inaan kugula mid dhigno fursadaha ugu fiican ee suurtogalka ah. Waxay qaadataa daqiiqado yar in lagu bilaabo oo aad bilowdo inaad xoogaa lacag kasbato.
Marka, intee in le'eg ayaad ka kasban kartaa sahannada lacag-bixinta ee Ebuno?
Waxa aad kasban karto adoo qaadanaya sahanno waxay kuxirantahay dhowr arrimood. Dhiirrigelintu waxay kuxirantahay qotada dheer ee su'aalaha, sida ay u adagtahay in loo qalmo iyo inta ay sahamintu tahay. Uma qalmi doontid dhammaan sahammada aad gasho maadaama shirkaduhu ay badanaa raadinayaan nooc macaamiil ah oo gaar ah.
Waad kala noqon kartaa dakhligaaga midkood PayPal ama kaararka hadiyadeed ee jira ee qaybta ka-noqoshada. Haddii aad isticmaasho shirkad lagu kalsoon yahay sida Ebuno, waxay u dhowdahay in lagu khiyaaneeyo.
SwishPanelen waa shabakad shuraako ku ah Ebuno. Si aad wax badan u akhrido, aad SwishPanelen.se
Heli Money Online
Shaqada Guriga Ka Soo Baxay
Waa maxay sahannada la bixiyo?
Sahannada la bixiyo ma khiyaamo baa?
Sahannada laga bixiyo internetka - waa sida ay u shaqeyso waadna heli doontaa iyaga
Meelaha Sahaminta ee ugu Fiican Si Loogu Kasbado Lacag Online
Waan bixinay $ 100.000 USD inaga 100.000 + xubnaha
Waa maxay aad sugaya?
Ku biir Ebuno maanta oo bilow inaad lacag ka kasbato fikradahaaga
Nagu soo biir hadda!